Thumb Hole ပါသည့်လက်ရှည်နှင့်အဝါရောင်ပန်းရောင်အမျိုးသမီးဝတ်ရှပ်အင်္ကျီများကိုအခမဲ့ ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်အကောက်ခွန်ကင်းစွာ ၀ ယ်ပါ။ | WoopShop®
$18.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $53.99
အရွယ် L M S
အရောင် ခရမ်းရောင်နု ပန်းရောင် အမှောင် Grey က
L / ခရမ်းရောင် M / ပန်းရောင် L / ပန်းရောင် S / ခရမ်းရောင် M / ခရမ်းရောင် S / Dark Grey M / Dark Grey L / Dark Grey S / ပန်းရောင်
လက်ရှည်အရှည် - လည်ပင်း - အနီ - လက်တိုပန်းရောင်အမျိုးသမီးဝတ်ရှပ်အင်္ကျီ - L / Purple backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
item အမျိုးအစား: ရှပ်အင်္ကျီ
ပစ္စည်း: နိုင်လွန်၊ Spandex
feature ကို: compressed,Shrink, အသက်ရှူနိုင်သော, quick အပူပိုင်း
fit: ပုံမှန်ထက်သေးငယ်ကိုက်ညီသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးစတိုး၏အရွယ်အစားအချက်အလက်ကိုစစ်ဆေးပါ
item: Vital Seamless လက်ရှည်ကောက်ပဲသီးနှံများထိပ်
အရောင်: ပန်းရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ မီးခိုးရောင်
90% polyester နှင့် 10% polyurethane တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအသက်ရှူနိုင်သော၊ elastic၊ ပျော့ပျောင်းသောချောချောမွေ့မွေ့၊
လက်ရှည်၊ ရှင်းလင်းသော midriff စတိုင်၊3အစိုင်အခဲ၊ အမြန်ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ချုံ့ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေခြင်း
ဤအားကစားဝတ်စုံသည်ပြေးခြင်း၊ ယောဂ၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊
အရွယ် လက်ဝါးကပ်တိုင်လမ်းပခုံး (စင်တီမီတာ) ရင်ဘတ်အကျယ် (စင်တီမီတာ) ခန္ဓာကိုယ်အရှည် (စင်တီမီတာ)
класссная! Пришлабыстро !! Качествона 100% ... На 44 русскомвзялось, янеоблипку, норм..Рукавачутьсвободны..Рекомендую!
Jakoś ietwietna, materiałoddychający, na pewno zamówięwięcejkolorów :)
Супербыстраядоставка! Нарусскийразмер S заказала M, ориентироваласьпоотзывам။ Мойрост170см, ОГ88см, ОТ 64 см။ Отлично!
တကယ်အရည်အသွေးကောင်းတယ် အမြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ကဥရောပသို့ 11 ရက်အတွင်းကိုအပ်ခဲ့သည်။ အီးယူအရွယ်အစား 36 / 34 နှင့် 75C အတွက် M သည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ အကြံပြုလိုပါတယ်
ဖောက်သည် 5.0 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကို5/ 59663 ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။